Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » COVID-19 Spike wuxuu u Hanjabayaa Soo-kabashada Socdaalka Gudaha ee UK
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Iyada oo xannibaado si isdaba joog ah isu beddelaya socdaalka caalamiga ah, fasaxyada gudaha ayaa umuuqda sharad badbaado leh waqtiga dhow.
Fasaxyada gudaha ayaa lagu wadaa inay noqdaan kuwa ugu caansan UK 12 -ka bilood ee soo socda.
Kordhinta ballaaran ee kiisaska UK oo dhan waxay yareyn kartaa kalsoonida dadka socotada ah.
Meheradaha safarka ee u diyaar garoobaya xagaaga mashquulka ah ayaa laga yaabaa inay la kulmaan mowjado kansar ah ama dib -u -dhigis.
In kasta oo dalabka joogitaanku ka jiro UK isagoo xoog leh, kor u kaca caabuqyada COVID-19 iyo shuruudda ah in la is-go'doomiyo haddii 'pinged' ay halis gelin karto qorshayaasha xagaaga, iyo hawl-wadeennada dalxiiska ayaa seegi kara dakhli aad loogu baahan yahay xagaagan.
Dacwadda COVID-19 ayaa halis gelin karta soo kabashada safarka gudaha UK xagaagan
Sida laga soo xigtay ra'yiururin dhowaan, fasaxyada gudaha ayaa lagu wadaa inay noqdaan kuwa ugu caansan 12 -ka bilood ee soo socda, iyadoo 30% jawaabeyaasha UK ay doorteen safarka noocan ah, oo aad uga hooseeya 32% jawaabeyaasha caalamiga ah oo doorbidaya safarka gudaha. Iyada oo xannibaadaha si isdaba joog ah isu beddelaya socdaalka caalamiga ah, fasaxyada gudaha ayaa umuuqda sharad badbaado leh waqtiga dhow.
In kasta oo ay jirto baahi aad u saraysa, baaxadda weyn ee kiisaska guud ahaan UK waxay yarayn kartaa kalsoonida dadka socotada ah. Markay kiisaska soo kordhaan, dadka safarka ah waxay u badan tahay inay qaataan hab taxaddar leh xagga safarka xagaaga. Ganacsiyada safarka ee u diyaar garoobaya xagaaga mashquulka ah waxay la kulmi karaan mowjado kansarro ah ama dib -u -dhigis ah iyadoo qaar ka xishoonayaan aagagga dalxiiska ee dadku ku badan yihiin marka kiisaska ay kor u kacaan, in kasta oo xayiraadaha la fududeeyay.
Cudurka 'pingdemic' wuxuu si xun ugu dhuftay Boqortooyada Midowday, iyada oo 618,903 qof ay heleen ogeysiis ah inay is-go'doomiyaan muddada u dhexeysa 8-da Luulyo ilaa 14-keedii.
Iyada oo lambarka rikoorka ah la gooyey, safarka ayaa laga yaabaa inuu la kulmo carqalad xagaagan. Muddo go'doon ah ayaa ku jirta kaararka kuwa la jaray, iyo in lagu xaddido karantiilinta guriga waxay saamayn doontaa ballansashada fasaxa. Shakhsiyaadka Pinged ee leh jaale dhow waxay u badan tahay inay baajiyaan maadaama aysan mar dambe safri karin. Iyada oo kiisasku sii kordhayaan sababtuna tahay kala duwanaanshaha Delta oo aad loo kala qaadi karo iyo in badan oo la faray in la go'doomiyo, safarku wuxuu u muuqdaa mid loo dhigay xilli xun. In kasta oo xayiraadaha la fududeeyay iyo rajada soo nooleynta xagaaga oo aad u sareysa, 'pingdemic' wuxuu awood u leeyahay inuu xaddido safarka oo uu hor istaago soo kabashada gudaha ee UK.
Si loo xoojiyo ballansashada hawl -wadeenno badan ayaa soo bandhigay siyaasado lacag -celin oo deeqsi ah waxaana laga yaabaa inay la kulmaan rajada lacag -celinta socotada haddii kiisasku kor u kacaan, oo ballansashada safarka ay saamayso.
Siyaasadaha soo-celinta soo-jiidashada leh waxay kexeeyeen iibinta kororka ee hawl-wadeenno badan, si kastaba ha ahaatee, kororka kiisaska COVID-19 ayaa laga yaabaa inay saamayn ku yeelato dakhliga hawl-wadeenka. Socodka lacag caddaan ah ayaa u qallali kara hawlwadeennada ay saameeyeen kansarrada aadka u badan, dakhligu wuu dhici karaa, halganka maaliyadeedna wuu sii socon karaa.
Mario wuxuu leeyahay,
Ogosto 6, 2021 markay tahay 19:42
Talyaanigu waa isku doon!